Qalabka Xawaareynta dhalaalaya, Qalabka Korantada ee Escalator, Mashiinka Fallaadhiska - Hongli
Ku saabsan warshadaha
Aasaasay sanadkii 1997, Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co., Ltd waa xirfadle iyo hogaamiyaha soo saare qalabka aaladaha baaritaanka guud oo ay ka mid yihiin Heerkulbeegyada dhijitaalka ah, Heerkulbeeraha Infrared, iyo Digital Sphygmomanometer iwm Awooddayada billaha waa 850,000 unug oo heerkulbeegga iyo 100,000 oo cutubyo ah loogu talagalay Sphygmomanometer.
Shirkad tikniyoolajiyadeed oo sareysa, waaxdayada R&D waxay ka kooban tahay injineerro, farsamoyaqaanno iyo naqshadeeye khibrad badan u leh optoelectronics, semiconductor iyo IC design iwm.
Isticmaalka matoorrada Siemens servo iyo maamulayaasha dhaqdhaqaaqa Siemens waxay bixin karaan xasilooni xasilloon oo xasilloon, qaab nidaam qalliin oo ku habboon internetka, waxaana lagu xiriirin karaa internetka Waxyaabaha. Kontoroolka fog wuxuu ku saleysan yahay nidaamka kontaroolada ugu weyn, oo ay ku kala hooseeyaan noodhyo iyo isku kalsooni sare. Kontroolka dhululubo Daboolida yar ee firfircoon ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha, iyo qaabab kala duwan ayaa la heli karaa.
Saxnaanta sare, xarunta xasilloonida ee culeyska, dabacsanaanta dhaqdhaqaaqa sare. Adeegsiga cabbiraadda dhererka caadiga ah iyo U-qaabeeya qaab-qaab ayaa ka dhigaya xogta mid sii saxsan. Gaariga xamuulka ah waxaa xukuma Japan Panasonic servo motor, oo leh xasillooni aad u sarreysa. Isticmaalka nidaamka isku-dhafan ee Keyence, gudiga warshadaha shaashadda taabashada warshadaha, qalliinku wuu ka sahlan yahay oo la isku halleyn karo. Xogta cabbiraadda, iwm. Si otomaatik ah ayaa loogu keydin karaa keydka macluumaadka si loo fududeeyo weydiimaha xogta mustaqbalka iyo raad-raaca sheyga.
naqshadeynta ugu dambeysay
Aaladda isteerinka ee wadada tareenka dhulka